Wufuud ka Socda Maamullo is-diiddan oo ku Qulqulaya Magaalada Buuhoodle |
Wufuud ka Socda Maamullo is-diiddan oo ku Qulqulaya Magaalada Buuhoodle
buy neurontin online, buy dapoxetine online. Wufuud kala duwan ayaa dhowrkii casho ee lasoo dhaafay ku qulqulayay degmada Buuhoodle oo lagu wado in maanta lagu caleemo-saaro, Garaad C/risaaq Garaad Soofe.
Xubnaha wafdiyada ah ee gaaray Buuhoodle ayaa waxaa ka mid ahaa ku-xigeenka madaxweynaha Puntland, C/xakiin C/llaahi Xaaji Cumar Camey oo hoggaamiya wafdi isugu jira maamulka iyo baarlamaanka.
Wafdigan oo lagu soo dhaweeyay duleedka Buuhoodle ayaa sheegay inay inay u socdeen si ay qayb-qaataan caleemo-saarka garaadka Soofe oo ah garaadka guud ee beelaha daga degmada iyo deegaanno ku dhow-dhow.
Guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Somaliland, ayaa isna Buuhoodle gaaray shalay gellinkii dambe, isagoo ay wehliyaan xubno xildhibaanno u badan.
Sidoo kale, Wasiirka caafimaadka Somaliland, Saleebaan Ciise Xagla-toosiye ayaa soo gaadhay isaguna maalin ka hor degmadaas, isagoo sheegay inuu u yimid oo keliya ka qayb-galka caleemo-saarka garaadkiisa.
Degmada Buuhoodle ayaa waxaa soo gaaray madax-dhaqameed kala duwan oo ka yimid degaannada Puntland, Somaliland, gobollada dhexe, ismaamulka deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo gobolka Sool, waxaana la sheegay inay maanta imaanayaan oday-dhaqameedyo iyo siyaasiyiin kasoo kicitimaya Muqdisho.
Si kastaba ha ahaatee, caleemo-saarkan ayaa noqon doona mid ay isku arki doonaan siyaasiyiin maamullo is-diiddan ka kala socda, iyadoo aan saadaal laga bixin kara waxa ka dhici kara, wallow ay agaasinka caleemo-saarkaan mamnuuceen in arrimo siyaasadeed halkaas lagaga hadlo.